Tilmaamaha "Isbeddellada" Barnaamijka VfxAlert | vfxAlert official blog
New vfxAlert: ku raac suuqa adigoo adeegsanaya "Trends" tilmaame
Ganacsiga isbeddelka ayaa weli ah ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu sameeyo lacag ikhtiyaar ikhtiyaari ah. Ka ganacsigu wuxuu noqon doonaa mid la isku halleyn karo marka isbeddellada hal jiho ay ka muuqdaan waqtiyo badan. Tilmaamaha "Isbeddellada" ee barnaamijka vfxAlert ayaa kaa caawin doona inaad si dhakhso leh u qiimeyso xaaladda oo aad u hesho xilligan xulasho.
Waxaa jira saddex nooc oo isbeddel ah:
Uptrend ama «bullish» . Qiimo kasta oo soo socdaa ugu sarreeya (sare) iyo ugu yaraan (berkeda) ayaa ka sarreeya kii hore.
Hoos udhaca ama «bearish» . Mid kasta oo soo socda ee max / min ayaa ka hooseeya kii hore.
Dhinacyada . Max / min ugu yaraan waa isku heer. Waxaad ku furan kartaa ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah ikhtiyaar ballaaran, marka masaafada udhaxeysa khadadka isbeddelka ay ka bilaabato 3-4 shumacyo waqtiga shaqada. Waad furi kartaa heshiisyo sida "Xudduudka Dibedda / Gudaha", "Wuxuu Dhex Joogaa / Dibedda U Baxaa" .
Habka lagu go'aaminayo isbeddelka saddexda max / min ayaa loo tixgeliyaa mid caadi ah, wuxuuna ku jiraa dhammaan barashada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo loogu talagalay newbie's. Dhibaato ayaa jirta: markii seddexaad max / daqiiqo muuqato, inta badan dhaqdhaqaaqa waa la gudbiyaa, U-jeed ama dabaq ayaa dhow. Waad qalad ku sameyn kartaa marka uu dhacayo xitaa waqtiga dheer! Dhibaato ayaa jirta: markii seddexaad max / daqiiqo muuqato, inta badan dhaqdhaqaaqa waa la gudbiyaa, meel u dhow ama dabaq ah ayaa dhow. Waad qalad ku sameyn kartaa marka uu dhacayo xitaa waqtiga dheer!
On M1, qiimaha wuxuu marayaa 20-30 dhibic iyada oo aan u muuqan wax cusub oo xad dhaaf ah, marka aad ku furi karto dhowr ikhtiyaar oo faa'iido leh daqiiqado 3-5. Haddii aad ku baayacmushtarayso "qadiimiga" dhibcaha laga soo galo ee wanaagsan, waxaad u baahan tahay istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh loo beddelo.
'Isbeddellada' waxay adeegsadaan natiijooyinka 20-kii calaamadood ee ugu dambeeyay ee la dhammaystiray xilli kasta. Haddii ay jiraan xulashooyin WAC-macaash badan oo faa'iido leh markaa PUT ayaa kor u kacaya, xaaladda ka soo horjeedda ayaa hoos u dhacday. Haddii tirada faa iidooyinka ay la socoto 50/50 - flat market.
Muxuu qabtaa «Trend Power»?
"Isbeddellada" oo la mid ah calaamadaha vfxAlert waxay muujineysaa qiimaha isku dheelitirka u dhexeeya CALL / PUT faa'iidada ayaa loo beddelay. Waxaa jira muuqaal halkan ah oo ay tahay in lagu xisaabtamo marka la qorsheynayo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee soo socda.
Aynu xusuusano sida oscillator-ka 'Stochastic oscillator' u shaqeeyo: ka bixitaanka aagagga xad dhaafka / xaddiga badan ayaa ah ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh oo ah bilowga dib u noqoshada, waad furi kartaa ganacsi xitaa adigoon xaqiijin dheeraad ah helin Waxay ka shaqeysaa isgoyska MA, jabinta taageerada / iska caabinta, iwm.
Qiimaha "Awoodda" ee isbeddellada sidaas uma shaqeeyo. Tusaale ahaan, ku saabsan "Xoog" jaantuska, waxaad dhihi kartaa tan: "20-kii calaamadood ee ugu dambeeyay faa iidada PUT. Muddo intee le'eg ayay u muuqdeen ma ogin, laga yaabee inuu isbeddelku dhammaado, waxaa fiican inaad sugto. "
«Tabaryar» ayaa laga yaabaa inay muujiso bilowga isbeddel cusub, markay iibiyeyaashu / iibsadeyaashu hadda bilaabeen inay beddelaan isku dheelitirka awoodda iyo tirakoobyada aan la socon.
Haddii «Trends» ee ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah loo isticmaalo sida tilmaamaha ugu muhiimsan, raadi barta laga soo galo qiimayaasha Dhexe. Xilliga dib u noqoshada ayaa la soo dhaafay, dhaqdhaqaaqa ayaa sii xoogeysanaya waxaana weli jira waqti ku filan oo go'aan lagu gaaro oo si sax ah loo xisaabiyo dhicitaanka. Tani waa talo kaliya, go'aanka ugu dambeeya wuxuu ku sii jiraa ganacsadaha !
Sidee loo ganacsadaa?
«Jihada isku midka ah ee jaangooyooyin kaladuwan ayaa kordhiya suurtagalnimada sii socoshada iyo isku halaynta barta laga soo galo» - mid ka mid ah mabaadi'da aasaasiga ah ee falanqaynta farsamada. Waxaan sidoo kale adeegsan doonnaa «Isbeddellada»: si dhakhso leh ayaan u qiimeyn doonnaa xaaladda xilliyada hoose iyo ka sarreeya ee la xiriira midka hadda jira, ka dibna waxaan u fureynaa ganacsiga jihada dhaqdhaqaaqa ugu weyn.
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan waa istiraatiijiyadda istiraatiijiga badan "Saddex shaashadda waayeelka". Waxaan eegeynaa sida ay ugu shaqeyso Litecoin:
Farsamadu waxay ka shaqeysaa dhammaan hantida, oo ay ku jiraan cryptocurrencies iyo waqtiga M1 sida ka muuqata fiidiyowga . Ugu horreyntii, waxaan eegeynaa isku dhaca jihooyinka isbeddelka, laga bilaabo waqtiga ugu sarreeya illaa kan hoose, xaqiijinta ka socota barnaamijka laba-geesoodka ah ee vfxAlert. Way fiicantahay markii meelwalba ay kajirto “Middle Trend”, laakiin tani maahan waxa ugu weyn. Fiiro gaar ah u leh dhicitaanka: natiijo joogto ah oo togan, waa inay ahaataa ugu yaraan 3-5 daqiiqo.
Talooyin ku saabsan isticmaalka…
1. Waxaan had iyo jeer raacnaa maaraynta lacagta. Marka tilmaan bixiyaha waqtiga oo dhan uu muujiyo isbeddel xoog leh oo hal dhinac ah, ganacsadaha ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah wuxuu u nugul karaa xiisaha macaashka wuxuuna bilaabi karaa inuu furo fursado dheeri ah oo ku saabsan rajada dhaqdhaqaaqa sii socda. Suuqa wuxuu had iyo jeer ku ciqaabaa "kuwa rajo wanaagsan" sida rogaal celinta degdegga ah. Waxaan helnaa khasaaro weyn ama xitaa gebi ahaanba waayi deebaajiga!
2. Tilmaamaha "Isbeddellada", sida tilmaame kasta oo kale, ma noqon karo qodobka kaliya ee furaya ikhtiyaar. Xogteeda marwalba waa in lagu xaqiijiyaa astaamaha vfxAlert iyo aaladaha kale ee falanqaynta farsamada: ka gudubka Celceliska Dhaqdhaqaaqa, xad dhaafka / iibka oscillators. Waxaa lagugula talinayaa inaad la socoto dhaqdhaqaaqa isbeddelada ee mugga iyo dheelitirka xoogagga Bull Power / Bear Power.
3. Kahor intaadan furin ganacsi ku saabsan "Isbeddellada", ha ilaawin inaad muuqaal ahaan u hubiso xaaladda hadda jirta. Waxay u shaqeysaa sida ku xusan xogta taariikhiga ah, markaa had iyo jeer dib u dhac ayaa ku imaan doona, ma "arki karo" suuqa gebi ahaanba:
muuqaalka qaababka laambadda dib u celinta,
- habka qiimaha heer sare oo taageero / iska caabin ah,
max / min maxalliga ah taas oo dib-u-celin ama dib-u-celin ay ka bilaaban karto,
Tan waxaa sameyn kara oo keliya qofka go'aanka saxda ah: ikhtiyaar u fur hadda ama sug calaamadda ganacsi ee binary ee soo socota .
4. Marba marka ka dambaysa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ah, ayay sare u kacaysaa ixtimaalka isbeddel xoogani ka dib dhammaystirkiisa. Xaaladaha noocaas ah, waxaad ka furan kartaa meherad calaamadaha ugu horreeya ee kala-goyn kala duwan, isbeddellada ku dhaca "Isbeddellada" iyo calaamadaha ganacsiga tooska ah ee tooska ah ee ka socda vfxAlert;
5. Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan meheradda ganacsiga binary ee caanka ah!
Aan soo koobno . Faa'iidada laga helayo ganacsiga isbeddelka ku xiran waxay kuxirantahay saxnaanta falanqaynta iyo waqtiga dhicitaanka saxda ah - ugu yaraan 3-5 xilliyada waqtiga. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad eegto sida calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay ugu shaqeeyaan koontada demo kahor intaadan u adeegsan ganacsiyada dhabta ah.